Disney sy Vodafone dia manambatra ny hery hamorona ny Neo, ny smartwatch an'ny ankizy | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Fitaovana Android, About us, SmartWatch
Smartwatches dia tonga tamin'ny fiainantsika taona maro lasa izay. SAINGY ny fanamafisana ireo entina mitafy ireo ary "fanekena" ho fitaovana "ho an'ny rehetra", nanjary zava-misy tao anatin'ny roa taona lasa. Ny ankamaroan'ny lesoka dia ny fahasamihafana eo amin'ny tsena noho ny fidiran'ny mpanamboatra vaovao. Ny fifaninanana noforonin'ireo mpanamboatra vaovao dia nanjary maodely lafo vidy kokoa. Androany isika dia mijery iray tena manokana, ny Neo avy any Vodafone.
En smartwatch hitantsika fampiasana maro sy ny rindranasa azontsika ampiasaina isan'andro. Fa rehefa miresaka famolavolana famantaranandro natao ho an'ny zaza tsy ampy taona, dia karazana tombontsoa hafa izay raisina. Amin'ny lasa tena zava-dehibe ny puce GPS ho an'ny localisation. Ho an'ireo ray aman-dreny mahatsiaro ho milamin-tsaina kokoa amin'ny fahalalana amin'ny fotoana rehetra misy ny zanany dia manolotra an'i Neo i Vodafone, miaraka amin'i Disney. Smartwatch koa manintona ny zaza tsy ampy taona.
Neo, ny smartwatch an'ny ankizy izay ho tianareo roa
Misaotra ny Teknolojia Vodafone e SIM efa famolavolana natao ho an'ny mpihaino ankizy iray manana ny fanaingoana Disney, Neo no smartwatch tonga lafatra. Famantaranandro iray izay ho an'ny be antitra dia fitaovana geolocation ho an'ny zaza tsy ampy taona izy io tsy maintsy manintona azy ireo koa izany. Misaotra a endrika miloko, fitaovana mety hahafinaritra sy a fijery zaza de afaka ampanjifaina amin'ny endri-tsoratra Disney, misy zaza te-hitafy azy.
Neo dia tonga lafatra ho an'ny ankizy satria smartwatch izay tsy mila na inona na inona. Ankoatry ny fanaraha-maso ny hetsika, kalandrie misy fanairana sy fampahatsiahivana Fakan-tsary 5 megapixels. Ireo mpampiasa afaka mamaly na miantso avy amin'ny famantaranandro, ary na dia hafatra mampiasa soratra default. Ary mazava ho azy fa afaka mampiasa fanaraha-maso ny ray aman-dreny sy mampiasa ny maody toerana izay manome vaovao mombamomba ny tena ora momba ilay toerana.
Raha mijery ireo fiasa ara-teknika dia manana ny Neo Snapdragon 2500W processeur. Nahita fahatsiarovana izahay RAM 512MB ary fahafaha-manao Fitehirizana 4GB. La bateria manana fahaizana 470 Mah, zavatra izay midika fa ny fizakan-tenan'izy ireo dia tsy mihoatra ny mihoatra ny iray andro. Tsy maintsy miandry isika hatramin'ny fiandohan'ny 2.021 azo alaina amin'ny magazay, ary mbola tsy manana fampahalalana momba ny vidiny izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Disney sy Vodafone dia manambatra ny hery hamoronana an'i Neo, famantaranandro ho an'ny ankizy
Ny Snapdragon 888 dia efa ofisialy ary tonga miaraka amin'ny hery lehibe ho an'ny faran'ny taona 2021